Fallaagada Itoobiya ayaa beenisay in ujeedkoodu uu yahay in ay la wareegaan caasimadda - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Fallaagada Itoobiya ayaa beenisay in ujeedkoodu uu yahay in ay la wareegaan...
Fallaagada Itoobiya ayaa beenisay in ujeedkoodu uu yahay in ay la wareegaan caasimadda
Fallaagada dagaalka kula jirta dowladda Itoobiya ayaa ku gacan seydhay wararka sheegaya in shacabka ku nool caasimadda Addis Ababa ay cadaawad u qabaan imaatinkooda & joogitaankooda.
Jabhadda Tigreega ee TPLF, ayaa horumarro samaysay toddobaadyadii u dambeeyay, waxayna hadda caasimadda u jirtaa 400 oo kilomitir.
Afhayeenka fallaagada ayaa beeniyay in gelitaanka magaalada ay sababi doonto in dhiigu dariiqyada mulacyeeyo.
“Sheekada dadka ku nool Addis aad ayey nooga soo horjeedaan, gabi ahaanba waa laga badbadiyay….Addis waa caasimadii Itoobiya, waa meel dhalaalaysa…….. Sheegashada ah Addis waxay isu beddelaysaa meel dhiig-buux dhaafsho haddaan galo oo la wareegno, gabi ahaanba waa wax lagu qoslo…” ayuu yiri Getachew Reda, afhayeenka Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigraygu yidhi.
Kooxda TPLF ayaa dagaal sanado ah kula jirta xukuumada uu hogaamiyo raysal wasaare Abiy Ahmed.
Sidoo kale jabhada kale ee OLA ayaa iyana ku biirtay dagaalka lagula jiro dowladda. Ujeedadu waa in la rido ra’iisul wasaaraha.
“Haa diyaar ayaan u nahay laakiin lama wada xaajoon karno qof weli doonaya in uu dadkayagii cunaqabataynta ku sii hayo oo gaajada iyo macaluusha carruurta u adeegsado hub & dagaal, inta shuruudahaas aan soo bandhignay laga soo baxayo, annagu waxaanu diyaar u nahay in aan dagaalano,” ayuu hadalkiisa kusoo xidhay afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda.
Bishii November ee sanadkii hore ayuu ra’iisul wasaare Abiy u diray ciidamada federaalka gobolka Tigray si ay meesha uga saaraan maamulkii gobolkaa oo TPLF ay hogaamin jirtey, isagoo ku eedeeyay inay weerareen saldhigyo ciidan federaali ah.
Previous articleXisbiyada siyaasadeed ee Mali waxay dalbanayaan in xukuumadda talada haysa ay ixtiraamto jadwalka kala guurka
Next articleDhismaha dhuumaha saliida ee Uganda ayaa caqabad wajahaya